Kuzvichenesa zvikadaro Mazino At Home | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "kuzvichenesa zvikadaro mazino kumba"
Sei kuzvichenesa zvikadaro mazino MUCHIDIMBU uye BASA!
Pane nzira dzakawanda kwazvo munhu anogona vasarudze, sei sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino. kuva vakachena, chena mazino ane hombe. Kana mazino ako akatarira zvavanokwanisa, iwe uzviremekedze uye nechivimbo, akagadzirira kutora nyika. Pane rimwe divi, pamwe tsvuku meno dingy, unotanga kunzwa kuchengeteka uye murege Vanotoda kunyemwerera. Kupfuuridza nguva, mazino ako chete kuenda kuipa kana musingadi kutora matanho akakodzera kune rakanga rachena uye richijeka pavo.
Kuti vawane mazino machena, danho rokutanga ungada kuedza sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ari nokuchinja enyu dzose mushonga wemazino kuti rakanga rachena shanduro. mushonga wemazino ichi rine awedzera pakugadzira, rakanga rachena zvinogadzirwa kuti vanoshanda kubvisa echitema kure mazino ako, Akavasiya vakatarisa chichiwedzera akachena kupfuura kare. toothpastes ava yemanyorero mutengo chakafanana yenyu dzose mushonga wemazino, asi anogona kukupa nemigumisiro inoshamisa pashure pevara kunyange shomanana.
The chena rinoparadza zvigadzirwa nguva dzose dzakakurumbira chaizvo. Kana uchida kudzidza sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino, edza micheka chena Zvicherere uye kuona musiyano vanogona kuita. Most chena rinoparadza zvigadzirwa ane gumi kusvika makumi maviri rinoparadza, uye kazhinji akataura kuti ukashandisa rimwe zuva kusvikira imi vakashandisa zvose micheka. Pakazopera iyoyo, uchakwanisa kuona kuchikosha kuvandudzika mamiriro uye ruvara mazino ako.
Panewo imwe nzira iri sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino inova Laser mazino rakanga rachena nzira, munhu zvizorwa nzira anoitwa pahofisi wako chiremba wemazino kana ari Laser mazino zviitwe pakati. nzira iyi inopa kunoshamisa kwazvo migumisiro yose mazino rakanga rachena nzira, zvinenge pakarepo rakanga rachena mazino yako noruvara maviri kana kupfuura. Ainziwo mazino bleaching, nzira iyi zvikuru yakakurumbira pasi pose, somumwe inonyatsobudirira mazino rakanga rachena nzira. Panguva nzira iyi, inokosha Ngirozi rinoshandisirwa pamusoro mazino ako, pashure iro akashandisa Laser chiedza pamusoro gel, simba uye rakanga rachena mazino ako somugumisiro.
Learning sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino hazvirevi kuva nebasa guru. With vakawanda chaizvo mazino zviitwe nzira, unogona kuwana nzira inoshanda kuti akupe yakajeka, chena kunyemwerera iwe nguva dzose ndaida. Hazvina kuti mari iwe mhanza kubvisa vakaoma echitema kubva mazino ako uye zvinoshamisa kuvandudza kunyemwerera kwako. The chichiwedzera mazino ako, paunonyanya kuda kunyemwerera, uye kana uchinzwa nani munotarisira nani.
Masaisai Ndiro rine kuti kushandisa kana achitsvaka nzira sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino. Uchava zvachose kuunganidza mijenya zvakanaka zvine chokuita nzira sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino uye kuti achaitira musoro muchiziva kuti vave chichiwedzera akachena mazino Zvinobatsira vose, Saka ona kuti une chakanakisisa kunyemwerera unogona kuva.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:04 AM
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino, Laser mazino zviitwe, mazino zviitwe, kuzvichenesa zvikadaro meno, kuzvichenesa zvikadaro mazino kumba